Mibvunzo Yechipfuwo - Iyo Inowanzo Dzokororo | Bezzia
Iyo inodzokororwa mibvunzo yemhuka
Une pet mibvunzo izvo zvinotambudza musoro wako? Ipapo zvirokwazvo mamwe acho achave mune iwo atichazokuudza nezvako nhasi. Nekuti pane mibvunzo yakawanda iri muchimiro chekusahadzika chinotirova kana tiine chipfuyo chekutarisira nekudzivirira.
Tinoda kuita zvese mushe uye nekudaro, isu tinogara tichiguma tichikumbira zvakanyanyisa kukosha asi izvo zvinodikanwa kune rumwe rutivi. Ngazvive sezvazviri, hazvikuvadze kutarisa pane zvese zvatinokuudza nhasi, nekuti nenzira iyi, iwe uchasiya kusahadzika kwako munguva diki.
1 Ndinofanira kugeza kangani kati yangu?
2 Sei katsi purr?
3 Ndinodzidzisa sei imbwa yangu?
4 Mibvunzo nezvezvipfuyo: Ndingazvidyisa sei?
5 Vanoda here kubayiwa nhomba?
Ndinofanira kugeza kangani kati yangu?
Ndiwo mumwe wemibvunzo nezvezvipfuyo izvo zvatakanzwa kazhinji. Chaizvoizvo nekuti hapana mhinduro yakapfupika kunyangwe, kunyangwe isu tichaedza. Ichokwadi kuti mvura ndeimwe yekutya kukuru kune katsi dzedu. Nekudaro, sembwanana, tinofanirwa kuzvijairira zvishoma nezvishoma. Kana iwo ari madiki, isu tinofanirwa kuwashambidza kazhinji, nekuti ivo havagone kuzvinanzva ivo pachavo uye neapo vava vakuru. Gara uchishandisa shampoo yakakosha uye yeuka izvozvo unogona kuishambidza mwedzi wega wega,. Mushure mekuzvarwa kwavo kwekutanga, unogona kumirira kusvika kumwedzi miviri. Asi zvinoenderana nekuti inosviba here kana kuti kwete, izvo dzimwe nguva zvinoita kuti tigadzirise nguva idzi.
Sei katsi purr?
Icho chimwe chezva ruzha rwakajairika kuti tinogona kuwana. Ichokwadi kuti pane dzimwe nguva zvakataurwa kuti zvinogona kufanana nekutya, asi isu takavanzwa mumamiriro akasununguka. Muchokwadi, kana ivo vava kuda kurara kana patinozovabata. Nekudaro, zvinonzwisiswa senzira yekunyatsoratidza zvaunonzwa. Sezvo kune rimwe divi, unogona kuve mufaro wakazara uye kune rimwe divi, kuratidza kushushikana kana kutya kune chimwe chinhu.
Ndinodzidzisa sei imbwa yangu?
Zvirokwazvo iwe ungafare kana kufara kana imbwa yako ikakuteerera iwe mune zvese. Kukutora kana kukuunzira zvinhu zvese zvawakakumbira, ingave iri imwe yemazano makuru atinoda kunakidzwa. Asi ichokwadi kuti kune izvi, iwe unoda chakanaka dzidzo. Asi kwete zvakanyanya kuomarara, asi zvakare sanganisa kunakidza uye kusimudzira hukama pakati pemuridzi nechipfuwo chake. Kumubatsira nezvese zvaanoda uye nekumupa rudo rwakawanda kwakakosha zvakare kuti azobva azvidzorera kwatiri nenzira yekuteerera.
Mibvunzo nezvezvipfuyo: Ndingazvidyisa sei?
Zvinotaridzika kunge zvakapusa, asi hazviwanzo kudaro. Rangarira kuti, pasina kurova chakakomberedza gwenzi, zviri nani kutenga chikafu chega chega chematanho acho. Nekuti mune ese iwo uchazoda zvakakosha zvinovaka muviri uye mhando iyi yechigadzirwa ichakupa iwe. Zvirinani kusavafudza nazvo chikafu chakagadzirwa pamba, nekuti ichokwadi kuti vanogona kuunza kushomeka kwehutano. Saizvozvowo, hazvikurudzirwi kuvapa zvasara nekuti vanogona kutakura zvimiti kana minzwa zvinokanganisa gadziriro yavo yekugaya.
Vanoda here kubayiwa nhomba?
Huye, mhuka dzinovaraidza dzinoda kubaiwa jekiseni. Uye zvakare, mutemo unouisanganisira, saka hatifanire kufunga kaviri. Ichokwadi kuti kana isu paine chero mibvunzo, zvirokwazvo vet achafara kukubatsira iwe nekuigadzirisa. Kubayiwa jekiseni ichokwadi kuti unozodzivirirwawo pachirwere chipi zvacho chaungangobata. Mune zvimwe zviitiko vanogona kuve vakaomarara kana iwe usina iyo vaccine zvakakodzera. Nguva yekudzivirira inotanga rini? Zvakanaka, mushure memavhiki matanhatu uye kusvika mushure memwedzi mitanhatu, angangoita. Nekudaro, zvinogara zvirinani kubvunza kune nyanzvi kuitira kuti ivo vagoratidza nguva imwe neimwe iwe yaunofanira kuenda nechipfuwo chako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Mascotas » Iyo inodzokororwa mibvunzo yemhuka
Mango inopa Guta Mhuka, iyo abc yemaguta maitiro
Maitiro ekuwana wavy bob bvudzi iro rakakurumbira